LED ကြော်ငြာငှားရမ်းခြင်းအဆင့် P3.91 နံရံ၏အသိဉာဏ်လမ်းကြောင်းသစ် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်နည်းပညာသည်ပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားလာသည်. ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သမားရိုးကျထုတ်ကုန်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီဖြစ်သည်. အသေးစားအကွာအဝေး, အတွေးအခေါ်အသစ်များ, မျက်စိမပါသော 3D နှင့်အသိဉာဏ်ရှိ cloud နည်းပညာကိုအားပေးခဲ့ပြီးဆက်လက်အားထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်. သူတို့သည်အီလက်ထရောနစ် LED ဖန်သားပြင်ထုတ်လုပ်သူများသို့ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့သွားသည်.
အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုကို ကွန်ရက်ကပိုပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်, ပြည်နယ်များနှင့်မြို့ကြီးများတစ်လျှောက်တွင်သာမက၊, ဒါပေမယ့်လည်းသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီး. ဒါဟာဒေသကိုဖြတ်ကူးနိုင်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြ. နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ၊ ပုံများကိုခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်၍ ထိန်းချုပ်ထားသော LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်အစုတွင်ပြသနိုင်သည်, နှင့်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဂီယာမတိုင်မီဝေးကျော်လွန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိ. သို့သော်, အချို့သောအထူးသောနေရာများတွင်, ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ပြသဗီဒီယိုမပေးနိုင်ပါ. LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဘုံအသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်, နှင့်အမျိုးမျိုးသောနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးဝယ်စင်တာများဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့, အရာကျယ်ပြန့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှာလူတိုင်းအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသည်.
အရည်အသွေးသည်အပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်ဖြစ်သည်. အဆိုပါထုတ်ကုန်ဝတ္ထုထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းဆန်းသစ်အမြတ်မော်ဒယ်ရှိသည်. ၏အားသာချက်များကဘာတွေလဲ? အာရုံခံကိရိယာ၏ဒေတာစုဆောင်းခြင်းပြီးနောက်, ရာသီဥတု, ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်, စိုထိုင်းဆ, PM2.5 အကြောင်းအရာနှင့်အခြားအချက်အလက်များကို LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်တွင်ပြသထားသည်. ဒါကြောင့်တစ် ဦး အသွားအလာလမ်းညွှန်မှုမျက်နှာပြင်လျှင်, ထိန်းချုပ်မှုစင်တာကတဆင့်, ဆာဗာမှကောက်ယူထားသောလမ်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို LED ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုစီသို့ပို့သည်, သောလူတိုင်းရဲ့အသက်တာ၌ကြီးသောအဆင်ပြေစေရန်ဆောင်တတ်၏.
အတူတကွအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် LED, ထို့အပြင်အချို့လုံခြုံရေးမေးခွန်းများကိုဆောင်ခဲ့လေ၏. ဥပမာ, ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုထုတ်လွှင့်သောအီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များကိုထုတ်လွှင့်သောသတင်းများမကြာခဏတွေ့ရသည်, သို့မဟုတ်ပစ္စည်းယိုစိမ့်သောမေးခွန်းများပါဝင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည် network tool ကိုကောင်းစွာအသုံးချသင့်သည်, ထို့အပြင်အသိဉာဏ် function ကိုတိုးတက်စေ, အမျိုးမျိုးသောချို့ယွင်းချက်များနှင့်အသိဉာဏ်၏ဖြစ်စဉ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောအန္တရာယ်များကိုဖြေရှင်းရန်, ဒါ့အပြင် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကသင့်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်.
ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နံရံ၏ installation အစီအစဉ်